टी-ट्वान्टी सिरिजमा दक्षिण अफ्रिकाको विजयी शुरूवात — Sanchar Kendra
१मन्त्रिपरिषद बैठकले गर्यो यस्ता ८ निर्णय
२विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई बालुवाटार बोलाईयो, यस्तो छ देउवा सरकारको तयारी
३उपत्यकामा मात्रै ९०४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
४देउवा सरकारद्वारा भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज
५थप ३३८३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, २४ को मृत्यु
६काठमाडौं उपत्यकामा फेरि लम्ब्याइयो निषेधाज्ञा
७कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा ल्याउने देउवाको तयारी
८लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
९अन्तत: डा. जागेश्वर गौतमको सरुवा सदर, उनको ठाउँमा कसलाई ल्याइयो ?
१०प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
११काठमाडौँमा भेरोसेल खोप दोस्रो मात्रा साउन २२ गतेदेखि दिइने
१२टोकियो ओलम्पिक- बेलारुसकी खेलाडीले किन पोल्याण्डँसग शरण माग्नुपर्यो ?
टी-ट्वान्टी सिरिजमा दक्षिण अफ्रिकाको विजयी शुरूवात
काठमाडौँ । आयरल्याण्डविरुद्धको टी-ट्वान्टी सिरिजमा पाहुना टोली दक्षिण अफ्रिकाले विजयी शुरूवात गरेको छ । डुब्लिनमा सोमबार भएको खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले आयरल्याण्डलाई ३३ रनले हराउँदै तीन खेलको सिरिजमा बिजयी शुरूवात गरेको हो । जितसँगै दक्षिण अफ्रिकाले १-० को अग्रता बनाएको छ ।
दक्षिण अफ्रिकाले दिएको १ सय ६६ रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको आयरल्याण्डले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १ सय ३२ रन मात्र बनाउन सक्यो ।
आयरल्याण्डका लागि ह्यारी टेक्टरले ३६ रन बनाए । बेरी म्याककार्थीले अविजित ३० तथा जोस लिटल १५ रनमा अविजित रहे । दक्षिण अफ्रिकाका ताब्रेज सामीले ४ विकेट लिए । लुंगी एनजिडी र जर्ज लिन्डेले २/२ विकेट लिए ।
यस अघि पहिले ब्याटिङ गरेको दक्षिण अफ्रिकाले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १ सय ६५ रन बनाएको थियो । दक्षिण अफ्रिकाका लागि एडिन मार्क्रमले सर्वाधिक ३९ रन जोडे ।
टोकियो ओलम्पिक- बेलारुसकी खेलाडीले किन पोल्याण्डँसग शरण माग्नुपर्यो ?
मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीले कोसँग किन मागे माफी ?
एन्फा प्रवक्ताद्वारा एकाएक राजीनामा, के हो कारण ?
टोकियो ओलम्पिक- ४० पदकसहित चीन शीर्ष स्थानमा, अरु कसको अवस्था केछ ?
टोकियो ओलम्पिकमा आज टेबल टेनिस र ब्याडमिन्टनको ब्याटल